ခုခေတ်ဟာ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ဖြစ်တာနဲ့အမျှ၊ အင်တာနက်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကြောင့်လူတွေအကျိုးကျေးဇူးရကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အင်တာနက်ကို မဇ္ဈိမပဋိပဋာနည်းနဲ့ သုံးတတ်သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်အကျွံစွဲလမ်းသွားမိသူတွေကတော့ ဘိန်း၊ အရက်၊ ဆေးစတာတွေလို
About disorder - ရောဂါအကြောင်း
addiction မဟုတ်ဘဲ ချက်နေရတာ၊ ဘလောဂင်နေရတာ၊နက်ရှော့ပင်နေရတာစတဲ့
လုပ်ဆောင်မှုကိုစွဲတဲ့ process addiction ဖြစ်ပါတယ်။
Symptoms - ရောဂါလက္ခဏာများ
၁။ tolerance - ယဉ်ပါးသွားခြင်း (ဆေးယဉ်သကဲ့သို့)-
၂။ withdrawal symptoms- ဆေးဖြတ်လက္ခဏာများခံစားရခြင်း -
အင်တာနက်သုံးတာလျှော့ချလိုက်ရရင်၊ စိတ်မပျော်တာ၊ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်လာတာ၊
၃။ပုံမှန်အချိန်တွေမှာပါ အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေးနေမိတာ၊ ဥပမာ-ဘလော့ဂ်မှာ
၆။ စိတ်ကူးထားတာထက်ပိုပြီးအင်တာနက်ကိုအချိန်ပေးနေမိတာ။ ဥပမာ-မအိပ်ခင်
နာရီဝက်လောက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီး ၂-၃ နာရီဆက်မိတာ။
၇။ အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အချိန်ပိုပေးနေမိတာ
(အင်တာနက်ကြည့်တာအပြင်) ဥပမာ- ဘလော့ဂ်မှာတင်ဖို့ စာအုပ်ရှာဖတ်တာမျိုး
၈။ အင်တာနက်ကို လျှော့ဖို့စိတ်ကူးပေမယ့် မအောင်မြင်တာ။
၉။ တခြားလူမှုရေးနဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပျက်ကွက်လာတာ။ အထူးသဖြင့်
၁၀။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု၊ အပြင်ထွက်အပမ်းဖြေခြင်း၊ တီဗီကြည့်ခြင်းစတာတွေ
၁၁။ အင်တာနက်အချိန်များလွန်းလို့ အိပ်ရေးပျက်ပြီး၊
၁၂။ အလုပ်အကိုင်၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးဝတ္တရားပျက်နေမှန်းသိနေလျက်နဲ့
၁၃။ Forming cyber relationships with strangers met online is also a
sign of internet addiction. - အွန်လိုင်းကတဆင့် မတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးသူ
သူစိမ်းများနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်-ဆက်ဆံဖြစ်တာ။ Extra-marrital relations -
စိတ်ဓာတ်ရေးရာအားနည်းချက်ရှိသူများမှာ ဒီရောဂါစွဲလွယ်ပါတယ်။ ငယ်ဘ၀က
စိတ်အနာရဖူးသူများ (psychological trauma)၊ စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်သူများ၊
အများနဲ့မဆက်ဆံချင် တကိုယ်တည်းနေတတ်သူများ၊ အလုပ်ဒဏ်ကိုရှောင်တတ်သူများ၊
Complications - ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ
၁။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာများ-health problems
(၂) ကျောအောင့်ခါးနာ စသော အကြောဆိုင်ရာဝေဒနာများ
(၃) လက်မ၊လက်ညိုးနှင့်လက်ခလယ်လက်ချောင်းလေးများထုံကျင်ခြင်းရောဂါ -carpal
(၅) အဆီတက်လာခြင်း-ထိုမှတဆင့် နှလုံးသွေးကြောရောဂါများ
၂။ မိသားစုပြဿနာများ-Familial problems
၃။ လူမှုရေးအကျိုးဆက်များ-Social problems
Treatment - ကုသမှု
ဆေးကိုတိကနဲဖြတ်ရင် ဆေးဖြတ်တဲ့ withdrawal symptoms တွေကြောင့်
လူထိခိုက်တတ်သလို၊ နက်သမားကို နက်တိကနဲဖြတ်ခိုင်းရင် စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊စတဲ့
၁။ တနေ့တာအတွင်းနက်သုံးချိန်ကို မှတ်တမ်းပြုစုစေခြင်း
၃။ မိသားစုသမားများအတွက်၊ မိဘ၀တ်-သားသမီးဝတ်-လင်ဝတ်-မယားဝတ်
Prognosis - ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်မှု
ခံယူချက်နဲ့ အမူအကျင့်ပြောင်းလဲနိုင်မှု attitude and behavioral change
Posted by မိုးယံ at 1:03 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
internet လား ရှိနေတော့လည်း သုံးချင်နေတာပေါ့.. မရှိတဲ့ နေရာ ကျတော့လည်း မသုံးဘူးပေါ့.. ဘာမှမဖြစ်ဘူး.. :D
စောင်း စောင်း မပြောပါနဲ့ တည့်တည့်ပြောပါ ဘလော့ဂါအားလုံး အဲဒီရောဂါ အနဲအများရနေကြတယ်
ဒို့ကတော့ ရောဂါကျွမ်းနေပြီး မရတော့ဘူးး)
အင်တာနက်ရောဂါ ရနေသူထဲတွင် မိုးယံလဲပါသည် :D
အင်း ကိုမိုးယံပြောသလိုဆို ကျွန်တော်လည်း ရောဂါတွေတော်တော်များတာပဲ ထမင်းမစားရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါ။ ညရောက်ရင် မအိပ်ရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါ၊ မနက်လင်းရင်အိပ် ယာမထရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါ။ အိပ်သာမတက်ရမနေနိုင်တဲ့ရောဂါ.. ဟီးဟီး အစရှိသဖြင့်ပေါ့.. အင်းကိုမိုးယံတို့ကျန်းမာရေး လိုက်စားတဲ့သူတွေကတော့ အဲလိုရောဂါတွေက ကင်းတာပေါ့.. ဟဲဟဲ နောက်တာနော် စိတ်ဆိုးရဘူးဗျ. သိလား